Akụkọ - you maara ndụmọdụ isii iji bụrụ ezigbo ndị ọrụ nkwụnye ụgwọ nke End End?
You maara ndụmọdụ isii iji bụrụ ezigbo ndị ọrụ nkwụnye ụgwọ nke Front End?
Ezigbo onye na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ihu igwe nwere ike ịma nke ọma otu esi eji igwe mgbe ị na-ebu ihe na-ebu ihe, belata akwa ejiji, belata mmanụ ọkụ, ma mezue ọrụ ahụ ngwa ngwa na nke ọma.
Ihe ntuziaka isii ndị a ga - eme ka ị bụrụ ezigbo onye na - ebu ọrụ ngwa ngwa! Bịa lee anya.
Mgbe ndị ọrụ nkwụsị nke ihu na-arụ ọrụ, ikiri ụkwụ ahụ dị nso na ala nke tagzi, efere ụkwụ na ihe ndọtị na-adakọrịrị, a na-eji nwayọọ na-agbada gas.
Mgbe Front End Loaders nọ n'ọrụ, trotul kwesịrị ịdị mgbe niile. N'okpuru ọnọdụ ọrụ arụ ọrụ, mmeghe ntụgharị kwesịrị ịdị ihe dị ka 70 ~ 80%.
Mgbe ndị ọrụ nkwụsị ihu na-arụ ọrụ, a ga-ekewapụ efere ụkwụ site na pedal brek, ma dina n'ala nke tagzi na-enweghị ịbanye na brek brek.
Ndị na-ebu ibu na-arụkarị ọrụ n'ebe ndị na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ụkwụ na-adị n ’ụkwụ brek mgbe niile, mmegharị ahụ nke elu na ala ga - eme ka onye ọkwọ ụgbọ ụkwụ zọọ ụkwụ na brek ahụ n’amaghị ama.
N'okpuru ọnọdụ nkịtị, ọ dị mkpa iji chịkwaa ọnọdụ engine ma gbanwee ntụgharị site na ịchịkwa ntụgharị nke trotul.
Nke a abụghị naanị na-egbochi ikpo oke ọkụ nke sistemụ braku na - akpata braking ugboro ugboro, mana ọ na - ewetakwa ịdị mma maka ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
Mgbe ndị na-ebu ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, ọkachasị mgbe ha na-eji shọvelụ, shọvelụ kwesịrị ịjuju akụrụngwa site na iji nwayọọ nwayọọ na-adọta ndị na-ebuli elu ma na-atụgharị njikwa n'okpuru ọnọdụ nke trotul siri ike.
A na-akpọ ndị na-ekpo ọkụ na-ebuli ma na-atụgharị ịwụ njikwa "ịdị uchu".
Usoro a dị ezigbo mkpa ma nwee oke mmetụta na oriri mmanụ.
Nchikota bu ihe jikotara aka na ebuli ihe site na ibuli elu na bọket akara. Usoro iberibe shọvelị nke Front End Loaders bụ iburu bọket ahụ n'ala wee jiri nwayọ dọọ na ikpo.
Mgbe a na-agbanye bọket ahụ n'ụzọ kwekọrọ na ikpo ihe ma nwee nguzogide, ụkpụrụ nke ibuli ogwe aka buru ụzọ wee weghachite bọket ahụ kwesịrị ibu ụzọ soro.
Nke a nwere ike zere nguzogide na ala nke ịwụ ahụ, ka enwere ike ịrụ ọrụ kachasị ike.
6, machibidoro iwu
Nke mbụ bụ kpam kpam machibidoro gbawara na trotul. Agbanyeghị ma ndị isi na - aga n'ihu na - aga ije ma ọ bụ n'oge a na - ebu shọvel, etinyela ụkwụ na osooso n'ike, ma na-eme ka osooso na-achịkwa ọkụ ma na-adịgide adịgide. O zuru oke belata ma belata ọdịda mmadụ mere na arụ ọrụ.
Nke abuo, a machibidoro skidding tire. Mgbe Front End Loaders na-arụ ọrụ, taya ga-amị amị mgbe ị na-enwe nguzogide na ịba ụba trotul. Ihe omume a na - abụkarị ọrụ na - adịghị mma nke onye ọkwọ ụgbọ ala na - arụ, nke na - eme ka oriri mmanụ na - emebi taya.
Nke atọ bụ iji gbochie machibidoro wheel azụ. N'ihi nnukwu egwu ala nke onye na-ebu ihe, onye ọkwọ ụgbọ ala na-ejikarị shọvel sie ike nke ala mbụ na ugwu okwute na arụmọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ ezighi ezi, ụkwụ abụọ ahụ na-aga n'ihu na-ebuli n'ala. Ọnọdụ ọdịda nke ihe ị na-ehulata ga-eme ka agụba bọket ahụ mebie ka bọket ahụ rụzie; mgbe wheel azụ na-ehulata elu, ọ dịkwa mfe ime ka ịgbado ọkụ nke ihu na azụ okpokolo agba na ndị ọzọ owuwu gbawara, ma ọ bụ ọbụna efere imebi.
Nke anọ bụ iji gbochie machibidoro ịkụ ikpo. Maka ịkwanye ihe ndị a na-ahụkarị, a ga-arụ ọrụ na-ebu ihe na II gear (gearbox ọsọ ọsọ asaa, a machibidoro gearbox atọ iji ihe nke abụọ), ma machibidoro ya itinye mmetụta na ngwongwo ahụ karịa gear II. Ziri ezi usoro kwesịrị ka ịgbanwee gia m na oge iji wuchaa shọvelụ usoro mgbe ịwụ nso ngwaahịa.
Ichetara ndụmọdụ isii a kọwara gị?
N'ụzọ igwekota, Anyịnya Ibu anọ, Onwe-Loading igwekota gwongworo, Cement igwekota agbapụtara Concrete, Bell Ibu Ibu, 2021d Wheel Ibu Ibu,